Kukho nendlela yokuhlamba ilitye
Izilwanyana ezilukhunileyo ziyi-miracle yangaphambili yoyilo. Izixhobo ezinjalo zikhululekile kakhulu. Awuqokeleli uthuli, ungafaki, kwaye ngexesha elifanelekileyo awukwazi ukujika. Ukukhethwa kwezigubungela zelitye mkhulu: i-white white okanye imbala, i-matte okanye i-glossy, inomzekelo okanye ngaphandle kwendlela. Abavelisi banqabisekileyo ukuba imveliso yabo ayifuni ukucoca. Kodwa ebomini kwenzeka, njengommiselo, ngendlela eyahlukileyo. Umntwana unokuphosa ibhola kwisiqwenga, kuya kuba nombhalo kuwo. Ungonakalisa umphezulu weengubo kwiholide, ukuvula ibhotile ye-champagne ephazimulayo, njl. Kuyakufuneka ukuba ungathethi ngongcoliseko, kodwa malunga nokukhuselwa kwendawo.
Iingcebiso kubaqeqeshi bezempilo
Musa ukuhlamba ubungqina bomhlaba kunye naluphi na iibhululo okanye iiponji ezinqabileyo. Baya kuthi bashiye imiqwenga okanye baqhekeze idilesi. Ukuhlamba kuyimfuneko isiponsi esithambileyo okanye umgqomo obonwe kwisisombululo sesepha yokuhlamba.
Ukunyakaza kwesandla kufuneka kukhanyise, kujikeleze ngeenxa zonke. Kodwa isepha iyakushiya amanqabana angamnandi. Ngoko ke, emva kokunyanga, umgangatho uphathwe ngendwangu eyomileyo okanye i-napkin, engayifumana imfucuza kakuhle (ukusuka kwi-microfibre).
Ngaphambi kokuba uqale, kufuneka ukhulule izandla zakho zobungcweti, amawashi, amabhonkce. Ngaphandle koko kukho umngcipheko womonakalo ebusweni bomhlaba. Kwaye kufuneka abukeke ephelele, ebetha wonke umntu ngobuhle bakhe.
Ukungafuni ukuthenga iimali ngeengqungquthela eziqhekezayo. Funda ngokucophelela imiyalelo. Ezi nkalo zezoqoqosho zongezwa kwii-creams zasekhaya. Kwaye malunga ne-soda ngokuqhelekileyo, kufuneka uyibale. Ukuba ulahlekelwe xa ukhetha ucoceko, qaphela ukuphalaza. Imncinci yempembelelo engummiselo kwisilitye esibucayi, esezantsi umonakalo womonakalo. Zininzi iintlobo zezifumba zicocwe ngokufanelekileyo ngeendlela zokuhlamba iziglasi. Ezi zimali ekubunjweni kwazo zi-ammonia. Ayivumeli ukuba ibonakale kwisiqhawulo somtshato, into efanelekileyo xa isebenza. Ngokuba kunye naluphi na ukungcola kokuthungela, kunokususwa kalula.
Akuvumelekile ukucoca iipiliti kunye neemveliso eziqukethe i-acetone ekubunjweni kwazo. Ukufunda ngokucophelela ukwakhiwa kweendlela ngaphambi kokuba uvavanywe ngokusebenza. Impazamo iya kubangela umonakalo omkhulu kwifilimu, apho idizayini eyenziwa ngayo. Ukuziphatha kwefilimu kunokungalindelekanga kakhulu. Uyakwazi ukuphazamisa, aphendule okanye abuye avule umbala okomhlaza, okanye mhlawumbi akanamdla kwiikhemikhali.
Ukuphumeza uvavanyo lokukhusela kwindlela yokhethwa kwinqwelo. Yilula: sebenzisa ukulahla kwemali kwisiqephu sefilimu (ukuba ikhona) okanye kwindawo engenafikeleleki kweso lendoda. Nciphisa imizuzu elishumi. Eli xesha liyakwanela ukuqinisekisa ukungabikho kokungenakonakala komkhiqizo othengiweyo.
Umxinzelelo wokugqoka ngexesha lokuhlamba awukwazi ukubonelelwa. Olu xinzelelo lomelele ngokwaneleyo. Ungayifaka i-rag emanzi ngapha kwe-mop kwaye uyiqhube kwifilimu ngaphandle kwengcinezelo. Ukuba ukufakela kwefowuni kwenziwa ngcali, kunzima ukuyichitha. Kodwa ukuba kukho ukuphulwa kwethekhnoloji, kukho ingozi yomonakalo kwizinto eziphathekayo, oko kukuthi, ukuguquka kwayo. Yaye ukucoca kwakho ngokukhutheleyo kuya kukhokelela ekufuneni umninimzi onokukucebisa ukuba wenze umyalelo omtsha.
Abavelisi bacebisa ukucoca kunye necocekileyo yococa. Kwaye kukho kwakhona umbuzo wobugcisa bokuyila. Ungakwazi ukuphula i-geometry ukuba ifilimu imisiwe. Qinisekisa kwaye ususe i-spider web nge-whisk okanye ilinen elithambileyo. Izambatho zefilimu ezingenakuqokelela uthuli. Ezi ifilimu ziphathwa nge-antistatic agent.
Ngoku uxhobile ngolwazi lokunyamekelwa kokufakela. Imfuno ebalulekileyo kukusingatha ngokugqithisileyo ifilimu kunye nokukhutshwa komonakalo owenzela umatshini kunye neekhemikhali. Ukunyamekela kwakho kunye nokunyamekela kwilitye kukuvumela ukuba uzuze lobu buhle iminyaka emininzi.
Ungaqala njani ukucoca indlu?
Indlela yokugcina nokugcina ukutya ngokufanelekileyo
UDktunk Evgeny Tsyganov ufungela ngamabhaso
I-SMS-isimemezelo sothando ngosuku lwabathandwa bonke ngoFebruwari 14
Izithambiso eziphathekayo ezikhethiweyo zeisilumko, iAntumn-yeHlabathi 2015-2016
Ukuphuhlisa ukukwazi ukulawula iimvakalelo zomntu